Qiwi | November 2019
ငွေပေးချေမှုစနစ်များကို QIWI ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် Yandex နှိုငျးယှဉျ
E-commerce ဝန်ဆောင်မှုများကိုသငျသညျအငျတာနကျပျေါကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးချေရန်ခွင့်ပြုသည်။ သူတို့ကဘဏ္ဍာရေးအရောင်းအများအတွက်လုံခြုံရေးအဆင့်မြင့်ရှိသည်နှင့်အစဉ်အလာဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ်။ runet ခုနှစ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးန်ဆောင်မှု Yandex ငွေနှင့် QIWI ပိုက်ဆံအိတ်။
WebMoney QIWI မှပိုက်ဆံလွှဲပြောင်း
အသုံးပြုသူများသည်ကွဲပြားခြားနားသောအကောင့်ပေါ်တွင်ပိုက်ဆံထားရှိဒါကြောင့်သူတို့ကဘာသာပြန်ဆိုဖို့အတော်လေးခက်ခဲဖြစ်ကြ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်ဆက်စပ်သောငွေပေးချေမှုစနစ်များ၏ပြန့်ပွားနှင့်အတူပြဿနာများရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါပြဿနာအခြေအနေများတစ်ခုမှာ WebMoney ငွေပေးချေမှုစနစ်အတွက်အချိန် QIWI ပိုက်ဆံအိတ်အကောင့်မှရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: ငါအတည်ပြုချက်ကိုများနှင့်အခြားပါမစ်ကိုမြော်လင့်ဖော်ထုတ်ခြင်း၏ရှည်လျားသောဖြစ်စဉ်ကိုခံယူခဲ့သောကွောငျ့ပိုက်ဆံအိတ် QIWI အကြားပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းအစောပိုင်းက WebMoney ပိုက်ဆံအိတ်ပေါ် Kiwi အကောင့်များမှငွေလွှဲဘယ်လို WebMoney QIWI မှပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းရန်, မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
WebMoney မှတဆင့်အကောင့် QIWI Replenish
သူတို့ကိုမအသီးအသီးကိုသင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည်အဖြစ်အတော်များများအသုံးပြုသူများသည်ကွဲပြားခြားနားသောငွေပေးချေမှုစနစ်များအကြားရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းနှင့်အတူအခက်အခဲများရှိသည်။ အချို့ဒုက္ခရှိခြင်းအားဖြင့် Kiwi အပေါ် WebMoney ထံမှလွှဲပြောင်းနှင့်အတူအခြေအနေကပါပဲ။ အဆိုပါ Kiwi system ပေါ်တွင် WebMoney ငွေပေးချေမှုထံမှရန်ပုံငွေများကိုလွှဲပြောင်းဖို့လမ်းအပေါ် WebMoney QIWI ထံမှလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လိုအနည်းငယ်သာ။
ပိုက်ဆံအိတ် QIWI အကြားပိုက်ဆံလွှဲပြောင်း
မကြာခဏလိုအပ်ငွေလွှဲ, ဒါပေမဲ့သူတို့တယောက်ကိုတယောက်အကောင့်မှလာသည်အထိအလွန်အဆင်ပြေမဟုတျပါဘူး, ဒါကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းစက္ကန့်တစ်ဦးအမှု၌အထဲကယူသွားတတ်၏ရသောထိုကဲ့သို့သောငွေပေးချေမှုစနစ်များကိုတန်ဖိုးထားအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်း။ QIWI ငွေပေးချေမှုစနစ်အားဤအစာရှောင်ခြင်းစနစ်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
နီးပါးတိုင်းအီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ထဲကတဦးတည်းသုံးစွဲဖို့သင်ယူပါကအခြားအောက်မှာလျင်မြန်စွာရွှေ့ခြင်းနှင့်အတူတူပင်အောင်မြင်မှုနှင့်အတူအသုံးပြုစတင်အမြဲမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါဟာအလွန်လျှင်မြန်စွာဒီစနစ်အတွက်အလုပ်လုပ်ဆက်လက် Kiwi သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန် သာ. ကောင်း၏။
QIWI မှ Sberbank ကနေငွေလွှဲဖို့ကိုဘယ်လို
QIWI ပိုက်ဆံအိတ် - လူကြိုက်များတဲ့အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေစနစ်။ ဒါဟာရူဘယ်, ဒေါ်လာ, ယူရိုနှင့်အခြားငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ သိုက်နှင့် Kiwi ပိုက်ဆံအိတ်ထွက်လက်ငင်းငွေချေနညျးအမြိုးမြိုးကိုဆိုလိုသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ Sberbank QIWI ပိုက်ဆံအိတ်မှပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းရန်သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လို Sberbank ငွေပေးချေမှုစနစ် QIWI ပိုက်ဆံအိတ်အကောင့် Refill မှသင်သည်သင်၏ Kiwi သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကအခြားသူရဲ့ပိုက်ဆံအိတ် refill ခွင့်ပြုပါတယ်။
မည်သည့် E-ပိုက်ဆံအိတ်ထွက်လက်ငင်းငွေချေကမြင့်မားသောကော်မရှင်နှင့်တာရှည်စောင့်ဆိုင်းအချိန်ကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ခက်ခဲသည်ဖြစ်သောကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသည်။ QIWI စနစ်ကအမြန်ဆုံးမှာရန်ပုံငွေများဆုတ်ခွာဖို့အရှိဆုံးအကျိုးရှိသောနည်းလမ်းများထက်ကွဲပြားခြားနားသောအဖြစ်အဘယ်သူမျှမကွဲပြားသောအဘယ်သူမျှမဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အများအပြားသည်အသုံးပြုသူများနေဆဲ up ပြုလုပ်ရွေးချယ်ပါ။
ကျနော်တို့ငွေပေးချေမှုစနစ်အား QIWI အတွက်ပိုက်ဆံအိတ်အရေအတွက်ကိုလေ့လာသင်ယူ
မည်သူမဆို QIWI ပိုက်ဆံအိတ်ငွေပေးချေမှုစနစ်ကကိုယ်တော်နှင့်အတူနီးပါးမည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအဘို့သင့်ပိုက်ဆံအိတ်၏နံပါတ်သိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်ထွက်ရှာပါအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့သည်နှင့်သင်အများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ၌ဤသို့ပွုနိုငျသညျ, ကျနော်တို့နိုင်ရန်အတွက်အရာအားလုံးကိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ပါလိမ့်မယ်။ ငွေပေးချေမှုစနစ်၏နံပါတ်များကို Kiwi Kiwi အနှစ်သာရ Learn သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ရဲ့ login အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်နှင့်ပိုက်ဆံအိတ်၏နံပါတ်ဖြစ်သောကြောင်းမိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်။
PayPal သို့ QIWI ထံမှရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်း
ကွဲပြားခြားနားသောငွေပေးချေမှုစနစ်များအကြားငွေကြေးလဲလှယ်အမြဲအဆင်မပြေနှင့်အချို့သောပြဿနာများနှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများငွေပေးချေမှုစနစ်များအကြားရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းရန်ကြွလာသောအခါ, ထိုပြဿနာကို ပို. ပင်ပေါ်လာသည်။ အမျိုးမျိုးသောငွေကြေးဖလှယ်မှုများ၏အကူအညီဖြင့် - ဘယ်လို PayPal ကအကောင့် QIWI ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေပိုက်ဆံလွှဲပြောင်း, တကယ်တော့ Kiwi Paypal ကနေငွေလွှဲဖို့ပဲတလမ်းတည်းရှိနိုင်ပါသည်။
QIWI ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေ Yandex.Money ငွေလွှဲပြောင်း
တယောက်ကိုတယောက်ငွေပေးချေမှုစနစ်အားထံမှပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းအမြဲလွယ်ကူသည်မဟုတ်, ကကွဲပြားခြားနားသောလှည့်ကွက်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ သူတို့အားမကြာခဏဥပမာကုမ္ပဏီ Yandex များ၏ငွေပေးချေမှုစနစ်၏ပိုက်ဆံအိတ်ပေါ် Kiwi စနစ်ကတစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေပိုက်ဆံလွှဲပြောင်း, နှုနျးဖို့ရှိသည်။ ဘယ်လို Yandex အပေါ် QIWI ထံမှပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းရန်။
န်ဆောင်မှုများ e-commerce ကိုအလွန်အင်တာနက်ပေါ်ရှိကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုများအတွက်ပေးဆောင်၏ဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်း။ အဆင်ပြေအသုံးပြုမှုပိုက်ဆံအိတ်, သင်တော်ကိုအစဉ်မပြတ်ချိန်ခွင်လျှာစောင့်ကြည့်ရပေမည်။ နည်းလမ်းများစွာအတွက် QIWI ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာအကောင့်အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါ QIWI-ပိုက်ဆံအိတ်ချိန်ခွင်လျှာ Qiwi ပိုက်ဆံအိတ်စစျဆေးဖို့ဘယ်လိုအသုံးပြုသူများအမျိုးစုံပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ပြဿနာများကို QIWI ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းများ
လူတိုင်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိတိုင်း system သို့မဟုတ်မည်သည့်အဓိကစီမံကိန်းအားလွတ်လပ်စွာအလုပ်မနိုင်မသိတယ်။ စီမံကိန်းအဆိုပါပိုကြီးတဲ့, ပိုလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စနစ်တကျတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်နှင့် function ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်သည်။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောစနစ် QIWI ပိုက်ဆံအိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Kiwi ငွေပေးချေမှုစနစ်အတွက်အတော်ကြာအဓိကအကြောင်းရင်းများရှိနေပါသည်သည့် Kiwi ဖို့အဓိကစိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်းတချို့အချိန်သို့မဟုတ်အချိန်တခုခုမှာအလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
များစွာသောအွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များတွင်ဝယ်ယူမှုများအတွက်ပေးဆောင်နီးပါးမဆိုအဆင်ပြေလမ်းဖြစ်နိုင်သောဖြစ်လာ, ဒါသူတို့ဒါကြောင့်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ ကီဝီစနစ်အရပျ၌မဟုတ်ပါဘူးနှင့်လူကြိုက်များအွန်လိုင်းစတိုးများစွာကိုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ငွေပေးချေမှုအကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ကြိုးစားနေ။ ဘယ်လိုမဆိုကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူပါနှင့် Kiwi ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အတူထိုသို့ပေးဆောင် QIWI မှတဆင့်ဝယ်ယူမှုများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့စတိုးဆိုင်၏ဘေးထွက်အတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းသေးငယ်တဲ့များ၏ရှိရာရှေးခယျြမှုအလွန်ငွေပေးချေမှုစနစ်, မှတဆင့်သာဖြစ်နိုင်ပေမယ့်သင်ဆဲအများအားဖြင့်ပေးချေမှုကိုရည်မှတ် (သေးငယ်တဲ့ဝယ်ယူမှုထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် ဒဏ်ငွေများနှင့်အမျိုးမျိုးသောဂိမ်းအကောင့် replenish) ။
Yandex.Money ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. QIWI ပိုက်ဆံအိတ် Refill လုပ်နည်း
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်မှာပဲကောက်နှင့်အခြားထဲမှာပိုက်ဆံအိတ်တငွေပေးချေမှုစနစ်ကတစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းရန်အမြဲမဖြစ်နိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံဤဖြစ်စဉ်ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကကြီးမားသောကော်မရှင်နှင့်အတူဖြစ်ပျက်များနှင့်တစ်ခါတစ်ရံ, နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးရက်အနည်းငယ်ကြာပါသည်။ ဒါပေမယ့်အပြောင်းအရွှေ့ Yandex.Money ဖြင့် - Kiwi နေဆဲအတော်လေးကောင်းသောနေစဉ်။
ငွေပေးချေမှုစနစ်အား QIWI အတွက်ပိုက်ဆံအိတ် Remove
လူအတော်များများဟာငွေပေးချေမှုစနစ် QIWI ပိုက်ဆံအိတ်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, သငျသညျအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကစတင်သုံးစွဲနိုင်ပါကြောင်းကိုငါသိ၏။ အဆိုပါပိုက်ဆံအိတ်၏ဖယ်ရှားရေးနှင့်အတူအမှုအီလက်ထရောနစ်ငွေကြေးအများစုကိုအခြားစနစ်များ၌ရှိသကဲ့သို့, အနည်းငယ်ဆိုးရွားဖြစ်ကြသည်။ မည်သို့အသုံးပြုသူတစ်ဦးအတွက် logged လျှင်ငါ Kiwi အတွက်အကောင့်တစ်ခုကိုဖျက်ပစ်ပါဘူး, ပြီးတော့တချို့အကြောင်းပြချက်များအတွက်ကီဝီ-ပိုက်ဆံအိတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုလား, သင်ရုံနှစျခုနည်းလမ်းများနှင့်အတူကလုပ်နိုင်ပါတယ်။
WebMoney QIWI မှချည်နှောင်
အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်အား WebMoney နှင့် QIWI ပိုက်ဆံအိတ်အကောင့်ဘဏ်ကတ်များအကြားရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်း, အင်တာနက်ပေါ်မှာဝယ်ယူမှုခွင့်ပြုပါတယ်။ တဦးတည်းပိုက်ဆံအိတ်ရန်ပုံငွေလုံလောက်မဟုတ်ပါကအခြားနှင့်အတူစည်ပင်နိုင်ပါသည်။ သင်သည်မည်သည့်လက်စွဲငွေပေးချေမှု, အကောင့်များနှင့် WebMoney QIWI ပိုက်ဆံအိတ် configure ပါဘူးအခါတိုင်းအတူတကွချိတ်ဆက်နိုင်အောင်။
မှတ်ပုံတင်ကဒ် QIWI ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
အတော်လေးရုရှားငွေပေးချေမှုစနစ်များကိုအများကြီးနှင့်ကမ္ဘာချိန်ခွင်လျှာစာရွက်မှသူတို့၏သုံးစွဲသူများကသိုလှောင်မှုစနစ်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းလက်လှမ်း၏အဆင်ပြေနည်းလမ်းအဆင်သင့်အသုံးအနှုန်းများနှင့်အတူဘဏ်ကဒ်ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းပေးပါ။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောစနစ် QIWI ပိုက်ဆံအိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူမှရရှိနိုင်ကတ်ခဲ့ကြသူအနည်းငယ်ထဲကတစ်ယောက်လည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာဗီဇာ QIWI QIWI စနစ်ကနေတဆင့်ကဒ်ရဖို့ကိုဘယ်လို။
ပိုက်ဆံ Kiwi အပေါ်မလာဘဲနေလျှင်အဘယ်အရာကို
တခါတရံသူကဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါ၎င်းငွေပေးချေမှု terminal ကိုမှတဆင့် Kiwi ပိုက်ဆံအိတ်ပြီးနောက်ပိုက်ဆံ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာမလာပါဘူး, တခါတရံအဆိုပါပိုက်ဆံအိတ်မှာအလွန်အထင်ကြီးငွေပမာဏကိုဘာသာပြန်ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထို့နောက်အသုံးပြုသူ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံရှာစတင်သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်ပိုက်ဆံပိုက်ဆံရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်ရှိသည်ဖို့မလာဘဲနေလျှင်အဘယ်အရာကိုမျှမျှတတလွယ်ကူသောထွက်သယ်ဆောင်ထားတဲ့အများအပြားခြေလှမ်းများရှိပြီး, သင်မူကားအစဉ်အမြဲသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးဖို့မဟုတ်သကဲ့သို့, မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့်အချိန်မီထုံးစံ၌အရာအားလုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အကောင့် QIWI Replenish
တခါတရံကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် E-ပိုက်ဆံအိတ်ဖန်တီးဖြစ်ပျက်, ပြီးတော့ရှည်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တစ်ဦးအမှားလုပ်ဖို့မသကဲ့သို့အခြားအကောင့်ငွေလွှဲမယ့်ကော်မရှင်များအတွက် replenishment ၏ပမာဏ၏ထက်ဝက်ပေးဆောင်ပါဘူး, ဒါကြောင့်ဖြည့်စွက်ရန်မည်သို့မသိရပါဘူး။ သင့်အကောင့်ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ရန်အဆိုပါ Kiwi စနစ်ကအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဘယ်လို QIWI-ပိုက်ဆံအိတ်ပေါ်ပိုက်ဆံထားရန် Kiwi ပိုက်ဆံအိတ်ထိပ်ဆုံးလုပ်နည်း PayPal ကအပ်ငွေ WebMoney ပိုက်ဆံအိတ်သုံးစွဲဖို့အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဤလုပ်ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်: ကိုလည်းရှုပါ။
လောလောဆယ်သူတို့ရဲ့ဝယ်ယူမှုအများစုသည်အသုံးပြုသူများကွန်ယက်မှတဆင့်လုပ်နှင့်အဘို့ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအလွယ်တကူနှင့်အလျင်အမြန်အချို့စတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်အခြားအသုံးပြုသူငွေလွှဲနိုင်သည့်နှင့်အတူကို virtual ပိုက်ဆံအိတ်, လိုအပ်ပါတယ်ကြရပြီ။ အဲဒီမှာကွဲပြားခြားနားသောငွေပေးချေမှုစနစ်များ၏ကြီးမားသောအကွာအဝေးဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ယခုအချိန်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးတွေထဲက QIWI ဖြစ်ပါတယ်။